Mareykanka oo Ciidamo Cusub keenay Soomaaliya
You are at:Home»Warkii oo Dhan»Wararka»Mareykanka oo Ciidamo Cusub keenay Soomaaliya
Taliska isku dhafka Geeska Afrika ayaa sheegay in ay mas’uuliyad ka saaran tahay la shaqeynta Saaxiibadooda Bariga Afrika sida Soomaaliya waxaana uu ku dhawaaqay in uu diyaar u yahay kahortagga khatar weliba oo soo kororta.
Qubaro katirsan Ciidanka Mareykanka ee Taliskaan ku jira ayaa ka qaybgalay soo bandhigista dhoolatuska Ciidamadaan kahor inta aysan kasoo safrin Magaalada Vicenza ee dalka Talyaaniga iyaga oo usoo baqoolay dhanka Soomaaliya.
Qayb kamid ah soo bandhigistooda ka jawaabista dhacdooyinka degdeg ah ayay ku qabteen Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ah ee Muqdisho 20-21 Janaayo 2021 oo waqti ahaan ku beegan xiliga maalmo kadib markii ciidanka Mareykanka isaga xir-xirteen Soomaaliya.
Qorshaha Mareykanka ayaa ah in Ciidankaan uu fulin karo howlgallo ballaaran oo dhanka Militariga ah, ilaalinta Xarumaha diblumaasiyeed, Gargaarka, musiibooyinka, ilaalinta shaqaalaha samafalka & la shaqeynta Taliska Mareykanka AFRICOM iyo Saaxiibada Soomaaliya.
“Inkasta oo aan dhowaan dib u celinay Ciidamada Mareykanka guud ahaan Bariga Afrika, balse dib u soo celinta ciidankaan waxa ay muujineysaa wada shaqeynteena Soomaaliya in aan sida ugu degdegsan uga falcelino duruufaha dhanka Amniga iyo badqabka shaqaalaha Mareykanka, qorshahaan waa qayb kamid ah sugidda amniga”. ayay tiri Jennifer Mykins oo ah Agaasimaha howlgalada Taliska isku dhafka Geeska Afrika.
Mareykanka ayaa dhaqdhaqaaqaan ku leh 173-askari oo ka shaqeynaya xasiloonida iyo nabadgalyada dhammaan dhinacyada geeska Afrika ee wada shaqeynta kala dhaxeyso sida lagu yiri qoraalkaan.
Ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ka joogay waxaa lagu sheegay in ay tiro ahaan gaarayeen 700-800 oo askari, waxaana lagu saaray amar kasoo baxay Madaxweynihii 45-aad ee dalkaas Donald Trump, balse Taliska AFRICOM ayaa sheegay in uusan joogsaneyn howlgalkooda ka dhanka ah Al-Shabaab ee Soomaaliya iyaga oo kadib bixitaankooda fuliyay dhowr duqeyn.